Political Page ပုလဲသွယ်: 11-9-2012 Indian Northeast Members of Parliament meeting with U Saw Hlaing (MP of 1990 Election) in Rangoon
11-9-2012 Indian Northeast Members of Parliament meeting with U Saw Hlaing (MP of 1990 Election) in Rangoon
၁၁-၉-၂ဝ၁၂ အိန္ဒိယ၊ အရှေ့မြောက်ဒေသ၊ လွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံအပြီး ဦးစောလှိုင် (၁၉၉ဝ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်) နှင့်အတူ။
Shri Thomas Sangma, Dr. Thokchom Meinya, Shri Kumar Deepak Das, Shri. Mukut Mithi and Shri. Prem Das Rai
Posted by Dr. Tint Swe at 9:19 PM